Version 0.6.6 – N'ikpeazụ! nche tọhapụ
November 12, 2010 site na rịọ 13 Comments
Ga-amasị anyị na-ekele Joshua Hansen na Scott Caveza ha aka ẹfiọk na-enyere anyị aka debug abụọ XSS vulnerabilities na ndị nwere ndị mmadụ ọrụ na-eji Internet Explorer nchọgharị na nsụgharị ala karịa 8, ma ọ bụ mgbe xss nchebe n'ụzọ doro anya oyi. Anyị ẹse agụụ na-akpọ nke a version 0.6.6.6 ma maliteghachi ahụ mgbe nile na-akpọ atumatu. Ndị vulnerabilities adịghị inwe ihe ọ bụla n'ihe ize ndụ iji webmasters ma ọ bụ hosters iji Transposh, ma ọrụ nwere ike ịtụkwasị obi scripts site na saịtị ndị a site na iji sneaky XSS usoro.
Nke a na-ufụn nakwa bundles abụọ ọzọ mgbanwe e ugbua akanamde ma ga-ekeme ndidi chere ka a mesịrị tọhapụ n'ụzọ, akpa ke ekpri mma ka parser, enyere nkwado n'ihi na ụfọdụ ndị ọzọ HTML “emebi entities” dị ka &rsquo; nke e kere site na ngwanrọ na-agbalị outsmart njirimara, ga-amasị anyị ka na-ekele archon810 na enyemaka ya a ahụhụ akụkọ.
Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ bụ mgbanwe nkwado maka Google Sitemaps XML generator, na kwachie nwere otu leta wepụrụ iji kwesịrị ekwesị akwado php5.3, na ndị ọzọ ozi ọma, nke na-abịa version 4 a ngwa mgbakwunye ka support ama wuru, a version nakwa aka na-agbasa ihe 50k URL ókè nke na ụfọdụ ndị ọrụ nwere. Ya mere, anyị ga-aka na-ekele Arne Brachhold ya nnukwu ọrụ a oru ngo.
Ya mere, onye obula, gaa nweta nkwalite! naanị n'ihi na-achọta otu mbiet dakọtara a post bụ ndị dị otú ahụ a siri ike kwesịrị ekwesị.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: google-XML-sitemaps, obere, tọhapụ, securityfix, WordPress ngwa mgbakwunye
Version 0.4.0 – Obi ụtọ ọhụrụ integrations
January 1, 2010 site na rịọ 25 Comments
Ọhụrụ a version na-enye integrations abụọ ndị kasị ewu ewu WordPress plugins. Akpa, google-XML-sitemaps na-enye otu ụzọ ịmepụta sitemaps maka na google ma google webmaster ngwaọrụ, na mwekota emepụta ọ bụla URL ke sitemaps ọzọ urls n'ihi na a sụgharịrị nke ibe. Nke a na mwekota chọrọ dị mfe kwachie na-rụrụ na mbụ ngwa mgbakwunye, na-agụ otú ke FAQ, ma ọ bụ kpọtụrụ anyị na-enweta patched faịlụ. Anyị na-atụ anya ka ga-eme n'ọdịnihu na nsụgharị nke google-XML-sitemaps ga-agụnye a kwachie dịka nke ndabara.
Nke abụọ mwekota bụ na WP-ibu-Áhàámá nke na-enye a caching usoro nke WordPress, a ngwa mgbakwunye bụ n'ihi na gwụrụ obi ma na-enye ike caching usoro n'ọnọdụ tọn nsogbu n'ụzọ, echichi bụ ike mwekota ọbụna mụ. Otú ọ dị, a mwekota na-enye ihe a ngwa mgbakwunye onye ọrụ a dị mfe mgbanwe a na-ehichapụ eshgham page n'elu translation edinam, nke a na-egbochi nsụgharị na-eme otutu mgbe na site na ọrụ ịhụ na-abụghị sụgharịrị ọdịnaya (na ikpe nke na akpaaka-translation, asusu ugboro ugboro).
Ọ bụrụ na i nwere ihe plugins na ị chọrọ, obi tara na, na i nwere echiche dị otú (ma eleghị anya, ụfọdụ ndị na koodu), dị nnọọ idebe a dee ebe a. Na ee – obi ụtọ na afọ iri ọhụrụ anyị niile!
Mmelite 2010/1/3 – Ọ na-egosi na e nwere onye na njehie na kwachie ntuziaka, ọhụrụ ntụziaka na-emelite kwa oge a na saịtị FAQ ngalaba (ekele myatus). Na kwachie pụkwara ozugbo ebudatara site na nke a na njikọ : Sitemap-isi-322-patched
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: google-XML-sitemaps, obere, tọhapụ, WordPress ngwa mgbakwunye, WP-ibu-Áhàámá